I-Dragon Fruit Powder
Ungalihlukanisa kanjani ikhwalithi ye-collagen peptide powder
Njengoba sikhula, i-collagen izolahleka kancane kancane, okudala ukuthi ama-collagen peptides namanetha okunwebeka asekela isikhumba ukuthi siphuke, futhi izicubu zesikhumba zizoba yi-oxidize, i-atrophy, ukuwa, nokoma, imibimbi nokukhululeka kuzokwenzeka. Ngakho-ke, ukwengeza i-collagen peptide kuyindlela enhle yokulwa nokuguga ...
Kungani i-collagen peptide ingakhuphula ukuzivikela komzimba womuntu?
Ngokuthuthuka okusheshayo kwesayensi yezokwelapha yanamuhla, igciwane kanye nezifo kufanele kunciphe ekucabangeni, kepha isimo sangempela sisevesini. Eminyakeni yakamuva, izinhlobo ezintsha zezifo ziye zavela kaningi njengeSARS, i-Ebola, ehlale ilimaza impilo yabantu. Njengamanje, kukhona ...
Umsebenzi we-peptide encane esebenzayo yamangqamuzana
1. Kungani i-peptide ingathuthukisa isakhiwo senhlangano yamathumbu nomsebenzi wokumunca? Okunye okuhlangenwe nakho kukhombisa ukuthi i-peptide encane yamangqamuzana ingakhuphula ukuphakama kwe-villi yamathumbu futhi ingeze indawo yokumunca i-mucosa yamathumbu ukukhuthaza ukuthuthukiswa kwezindlala ezincane zamathumbu kanye ne-i ...
Imikhiqizo Yokunakekelwa Okunempilo ye-Huayan Collagen
NgoMeyi 29, 2021, uMnu. Guo Hongxing, usihlalo weHainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd., noMnu Shi Shaobin, umsunguli weGuangdong Beiying Fund Management Co., Ltd., Babe nomhlangano webhizinisi wokudingida ukubambisana kwezempilo imboni ukwenza iphethini entsha. Abaphathi BesiKhwama SeGuangdong Beiying ...
Kungani ungeza ama-peptide ezinhlanzi ze-collagen
Kukhona ama-70% kuya kuma-80% esikhumba somuntu esakhiwa yi-collagen. Uma ibalwa ngokwesisindo esimaphakathi sowesifazane omdala esingu-53 kg, i-collagen emzimbeni icishe ibe ngu-3 kg, olingana nesisindo samabhodlela awu-6 eziphuzo. Ngaphezu kwalokho, i-collagen nayo iyitshe legumbi lesakhiwo le ...
Umphumela nokusebenza kwe-walnut peptide
Usebenzisa i-enzymatic hydrolysis enezinga eliphansi lokushisa kanye nezinye izigaba ze-biotechnology ukwenza ngokuqinile ukucubungula ama-walnuts aziwa ngokuthi "igolide lobuchopho", asuse uwoyela omningi kuma-walnuts, futhi acwenge kahle izakhamzimba zawo, akhe ocebile ezinhlotsheni eziyi-18 zama-amino acid, amavithamini kanye namaminerali ...
I-peptide encane yamangqamuzana ingukudla okuyisisekelo kwezempilo ngekhulu lama-21
Ama-peptides yizinto eziyisisekelo ezakhiwa ngawo wonke amaseli emzimbeni womuntu. Izinto ezisebenzayo zomzimba womuntu zisefomini yama-peptide, angababambiqhaza ababalulekile ukuze umzimba uqedele imisebenzi ehlukahlukene eyinkimbinkimbi yomzimba. Ama-peptides avame ukukhulunywa ngekhulu lama-21, uchungechunge ...
Umphumela wokuvuselela i-peptide ku-BPH yamadoda
Abantu abaningi basebenza isikhathi esengeziwe, bahlala kuze kube sebusuku, baphuze futhi bahlanganyele, futhi futhi abanakho okujabulisayo, futhi bahlala isikhathi eside ehhovisi, okwenza i-BPH ibe nomkhuba omncane. I-BPH ivame kakhulu, uyazi ukuthi ibangelwa yini? I-Benign Prostatic Hyperplasia (lapha ngemuva kokubizwa nge-BPH) iyisifo esivamile ...
Umsebenzi nokusetshenziswa kwe-peptide yezinkomo
Hlakulela ithambo lezinkomo ezintsha ngokuphepha nokungcoliswa okukhululekile njengokungahluziwe, futhi usebenzise ubuchwepheshe bokusebenzisa obuphambili be-pancretin nobuchwepheshe bokwelashwa okunosawoti omncane, iprotheni elikhulu lamangqamuzana lifakwa i-enzymatic hydrolyzed libe yi-pure purity collagen peptide enesisindo esiphansi samangqamuzana, encibilikayo futhi emunca kalula ...
Uyazi ukubaluleka kwe-peptide encane esebenzayo yamangqamuzana?
Ukukhuluma iqiniso, abantu ngeke baphile uma bengenayo i-peptide. Zonke izinkinga zethu ezinempilo zibangelwa ukuntuleka kwama-peptide. Kodwa-ke, ngokuthuthuka okusheshayo kwesayensi nobuchwepheshe, abantu bazi kancane kancane ngokubaluleka kwe-peptide. Ngakho-ke, iPeptide ingenza abantu baphile saka, futhi ...
Ubudlelwano phakathi kwe-peptide nokuzivikela komzimba
Ukuntuleka kwe-peptide emzimbeni kuzodala amasosha omzimba aphansi, futhi kube lula ukutheleleka, kanye nokufa okuphezulu. Kodwa-ke, ngokuthuthuka okusheshayo kwe-immunology yesimanje, abantu baye bazi kancane kancane ngobudlelwano phakathi kwezakhi zepeptide nokuzivikela komzimba. Ngokwazi kwethu, ukungondleki kahle kwe-peptide ...
Kungani sidinga ama-peptide ngaso sonke isikhathi?
Njengesithako esisebenzayo sokugcina impilo, ama-peptides adlala indima ebalulekile ekulekeleleni amaseli anezakhamzimba, ngakho-ke kubalulekile ukuthi sinikeze i-peptide. Umzimba uqobo ungakhipha amanye ama-peptide asebenzayo, noma kunjalo, ngeminyaka ehlukene nasezimeni ezihlukile, kunama-peptide ahlukile angamasekhondi ...